grace mugabe on News24
ARTICLES RELATING TO GRACE MUGABE
Grace Mugabe, the wife of Zimbabwe former president Robert Mugabe, owns 16 farms, in what is against the country's land policy
Farm tractors, pick-up trucks and combine harvesters from former Zimbabwe president Robert Mugabe's dairy farm will go under the hammer to pay off debts, auctioneers have announced.
The government of Zimbabwe has objected to a move by South African police seeking to arrest Grace Mugabe, who is accused of assaulting a model with an electric cable.
Zimbabwean villagers who were evicted from Manzou farm in Mazowe in 2015 to pave way for the then first lady Grace Mugabe are reportedly facing "fresh eviction worries" as the country's ministry of lands is said to have "earmarked their land for redistribution to a suspected top government official".
Zimbabwe's former president Robert Mugabe and his wife Grace are fighting to retain a farm in Mazowe, and UK's Prince Charles and his wife have arrived in Gambia for a three-day visit.
Several Zanu-PF heavyweights have reportedly been taken to court after they failed to pay their farm workers' wages for more than a year.
Former Zimbabwean first lady Grace Mugabe is facing a new charge of assault, which stems from an incident with her housekeeper.
The National Prosecuting Authority has kept mum about Afriforum's claims that the NPA has applied for the extradition of Zimbabwe's former first lady Grace Mugabe.
South African police are seeking Interpol's help to enforce an arrest warrant for Zimbabwe's former first lady Grace Mugabe over an alleged assault of a model.
President Emmerson Mnangagwa has reportedly reassured Zimbabweans that he will make public the post-election violence report, and Mozambique has named top ex-rebels to army command.
Zimbabwean ex-president Robert Mugabe has been abroad 'for past the month' and his absence is being noticed at his rural home, and a Mohamed Salah statue in Egypt has been criticised for poor resemblance.
Zimbabwe's former president Robert Mugabe and his wife Grace have reportedly filed court papers challenging an application by three farmers who were evicted from a farm in Mazowe in 2009 to make way for the former first family's Gushungo holdings company.